Radio Dhangadhi 90.5 MHz | ईश्वर पोखरेल भन्छन्- नो मोर एमाले, नो मोर माओवादी !
Thursday, July92020, 16:49 | बिहिबार २५, असार २०७७ १६:४९
एकतापछि आलोपालो हुँदैन, जबजविरोधी देख्दा हाँस उठ्छ
फागुन २ काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच दुवैजना अध्यक्ष रहने गरी पार्टी एकतामा सहमति भएको सूचना चुहिएपछि एमालेका शीर्ष नेताहरु मंगलबार विहानै बालकोट पुगे ।
आफूलाई भेट्न आएका ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ लगायतका नेतासँग ओलीले प्रचण्डसँग भएको ‘वान टु वान’ वार्ताको प्रगति बेलीविस्तार लगाए ।
ओलीसँग भेटे लगत्तै हामीले एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेललाई पछ्यायौं । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा महासचिव पोखरेल कुराकानी गर्न राजी भए । यद्यपि उनले ओली-प्रचण्डबीचको सहमति ठोस रुपमा बाहिर ल्याउन चाहेनन् ।
महासचिव पोखरेलकै भाषामा सम्भवतः पार्टी एकताको सन्दर्भमा ‘केही राँटाहरु मिलाउन’ अझै बाँकी नै छ ।
पार्टी एकता संयोजन समितिका सदस्यसमेत रहेका महासचिव पोखरेलले अनलाइनखबरमार्फत चुनावलगत्तै भनेका थिए – पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्ति अर्थात केपी ओली नै हुनुपर्छ । पार्टीमा बहुकेन्द्र राख्नुहुँदैन ।
पोखरेलको यो भनाइलाई माओवादी पंक्ति र एमालेभित्रकै एउटा पंक्तिले पार्टी एकताविरोधी अभिव्यक्तिका रुपमा चित्रित गरे । तर, पोखरेलले यसबारे अहिलेसम्म बोली फेरेका छैनन् ।
एकताको पछिल्लो प्रगतिबारे ओलीसँगको भेटपछि हामीले महासचिव पोखरेलसँग यिनै विषयमा कुराकानी गर्‍यौं ।
यो सबै कामका लागि अन्तरिम विधान बनाउनुपर्नेछ । महाधिवेशनपछि त एउटा विधान आउँछ तर, त्यसअघि पार्टी चलाउने अन्तरिम विधानको कुरा छ ।
माओवादीको ४ हजार सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी छ, एमालेको २ सयको छ । त्यो कसरी मिलाउने ? यसमा छलफल हुन बाँकी छ ।
पाँचै वर्ष भन्ने छैन । ५ वर्ष पनि हुनसक्छ, ३ वर्ष पनि हुन सक्छ । त्यो त पार्टीले जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने कुरा हो ।
हामीले एमाले भएर सोच्दैनौं र पुष्पकमल दाहालसहितका माओवादी साथीहरुले पनि अब माओवादी भएर सोच्नुहुँदैन । यो पाए हुन्छ नपाए हुँदैन भन्ने सोचमा अब रहनुहुँदैन ।
हरेक बैठकपिच्छे अलग-अलग अध्यक्षता गर्छौं भन्दा भोलि वैधानिकताको कुरा पनि आउँछ । व्यवहारिक पाटोबाट पनि हेर्नुपर्छ भनेका छौं ।
पार्टी एक भइसकेपछि आलोपालो भन्ने हुँदैन । एकतापछि कामको बाँडफाँट हुन्छ, तर आलोपालो हुँदैन ।
जबज त क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि समाजवादी शासन प्रणालीमा पनि लागु हुने विचार हो ।
माओवादीले भनेको एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद पनि हिंसात्मक विद्रोहको कालखण्डबाट संक्रमणको स्टेप जस्तो लाग्छ मलाई । त्यस हिसाबले त्यो सकारात्मक छ । हामीले जबजको कुरा गर्दा एकाएक एमालेले ल्याएको हो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा शुरुवातदेखि यसमा रहेका विचारका भ्रूणहरु विकसित हुँदै जबज भन्ने ठाउँमा पुगेका हो ।
अध्यक्ष मण्डलको हिसाबले पनि जान सक्छ । को- चेयरमेनसिपको हिसाबले पनि जान सक्छ । निश्चित अवधि तोकेर अध्यक्ष हुने कुरा पनि आन्तरिक समझदारी हुन सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट प्राप्त भएका सकारात्मक र नकारात्मक अनुभवको निश्कर्ष यसको दोस्रो स्रोत हो । तेस्रो चाहिँ यसको दार्शनिक र सैद्धान्तिक पक्ष पनि छ । त्यो के भने द्वन्द्व सर्वत्र छ, त्यो प्रकृतिमा छ, मानव समाजमा छ, राजनीतिमा पनि छ । सबै ठाउँका द्वन्द्वलाई विधिसम्मत ढंगले प्रकट हुन दिएन भने त्यसले विष्फोटक रुपमा लिन्छ ।
हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद भनिरहँदा एमाले पार्टी विशेषको पेवा होइन । नेपालको विशिष्ठतामा मार्क्सवाद लेनिनवादको अभ्यास गर्दा विकसित भएको मार्क्सवाद हो जबज भन्छौं हामी ।
यो अन्तरवार्ता अनलाईनमा खबरमा प्रकाशित छ ।
त्यसैले बाहिर बहस छलफल के हुन्छ अलग हो, एमालेभित्र जबजको बारेमा औपचारिक र संस्थागत ढंगले कुनै बहस छैन । जबजको प्रसंग सकियो भनेर नयाँ सिद्धान्त निर्माण गरौं भनेर पार्टीमा कसैले कुरा उठाएको छैन ।
बुधबार ०२, फागुन २०७४ ०४:०२ मा प्रकाशित ।